Nextbike Konya Iibhayisikile zeeVenkile zeebhayisikile eziHlangayo kunye neNkqubo yokuLunga | RayHaber | Uloliwe | Indlela enkulu | imoto cable
ikhayaETURKEYUmmandla waseMntla Anatolia42 KonyaNextbike Konya Iibhayisikile zeebhayisekile zeSiza
07 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 42 Konya, Ummandla waseMntla Anatolia, JIKELELE, Highway, Systems Wheel Wheel, ETURKEY 0
I-Nextbike konya izikhululo zebhayikhi ezihlelweyo zeeshedyuli kunye nothintsho lwamalungu
Nextbike Konya, ukwenzela ukukhuthaza ukusetyenziswa kwebhayisekile njengendlela yokuhamba ukongeza ekusetyenzisweni kwezolonwabo kunye nezemidlalo; I-Nextbike Konya ijolise ekwandiseni i-Bisiklet Smart Bike Sharing System inde kuyo yonke i-Konya, ngaloo ndlela ibonelela ngothutho olusempilweni nolunokusingqongileyo kubo bonke abathanda iibhayisikile.
NgeNkqubo yokwabelana ngeSmart Bike, abathandi bebhayikili akufuneki baphathe iibhayisekile zabo, banokuqasha iibhayisikile ukusuka kwizikhululo zeKonya ezilandelayo kwaye babashiye baye nakwesiphi na isikhululo esilandelayo seBike Konya.
Iibhayisikile zingafumaneka kweyona ndawo iphambili yeKonya. Omele ukukwenza kukuzisa i-ELKART yakho kufutshane nesizali kwaye uthathe ibhayisekile. Ukubuyisa ibhayisekile, beka nje ibhayisekile kwindawo ekhoyo kwisitishi. Ungabhalisa apha, okanye kwesinye sezikhululo zethu ngexesha lokuqasha kwakho okokuqala.
Uqeshiso lwebhayisekile elandelayo
Udinga ikhadi lokuthenga ngetyala ukuqesha ibhayisekile! Ngenisa inombolo yakho yefowuni, igama kunye neenkcukacha zekhadi letyala kunye nokuqala ukuhamba ngebhayisikile! Ukuba unayo i-ELKART, kuya kufuneka uyisondeze kuzinzwa ngexesha lokubhalisa.
Ukuba ubhalisile ngebhayikhi elandelayo kwiwebhusayithi ngaphambili, sondeza i-ELKART yakho kwisava, faka inombolo yakho yefowuni kunye nekhowudi yePIN. Ngoku udinga i-ELKART yakho kuphela yokurenta ibhayisekile kwaye ubuye!
Hambisa i-ELKART kufutshane nes sensor
Ibhayisekile ivulwa ngokuzenzekelayo
Ungayithatha ibhayisekile ngophawu esitishini
Uya kubona ikhowudi yokutshixwa kwebhayisekile kwisikrini sokugqibela kwaye umyalezo wolwazi (iSMS okanye umnxeba omfutshane) uza kuthunyelwa kwifowuni yakho ephathekayo.
Beka ibhayisekile kwindawo efanelekileyo esitishini
Ukukhanya kwesitishi kubonisa ukuba ibhayisekile ibuyiselwe ngempumelelo
Nceda uzivale ibhayisekile xa ubuyile.
Ubhaliso lwebhayisekile elandelayo
Rekhoda ulwazi lwakho ngaphambi kokusebenzisa inkqubo yokuqasha ibhayisekile. Inkqubo yethu iyakwamkela ngenombolo yefowuni yakho kwirente kamva. Nje ukuba ubhalise, ungasebenzisa inkqubo yethu yokuqasha ibhayisekile kuzo zonke iidolophu zebhayisekile kwihlabathi liphela. Ngeakhawunti yabathengi unokurenta ukuya kwiibhayisikile ze-4.
Intlawulo elandelayo yebhayisekile
Ungahlawula ngekhadi letyala. Ukuqinisekisa ulwazi lwakho lokuhlawula, i-1 TL iya kuhlawuliswa kwikhadi lakho. Le mali iya kufakwa kwiakhawunti yakho ukuze uyisebenzise.
Ishedyuli yeemali ezilandelayo
Siyakwazi ukubonelela ngamaxabiso anomtsalane kakhulu kwiinkqubo zethu eziqeshisayo zokuqesha kunye nobukho bamaqabane ethu entengiso kunye nokulula.
Ungayibuyisela ibhayisekile yakho kwiindawo zethu ezisemthethweni. Nceda ujonge indawo yethu ukubona iindawo zethu.
Ezinye iindleko zenkonzo
Buyela kwiindawo ezingekho semthethweni okanye kwiindawo: i-4 TL ngekhilomitha nganye, ubuncinci be-20 TL
Umonakalo okanye ubusela: 300 TL
Ezi ntlawulo ziya kuthathwa njengembuyekezo yezinto ezifanele ukwenziwa. Enkosi ngokuqonda kwakho.
Kwimeko yomonakalo okanye ubusela, umntu oqesha ibhayisekile uya kuhlawuliswa umrhumo we-300 TL. Kwimeko yokungahoyi okukhulu okanye ukonakala ngabom, umntu oqesha ibhayisekile unoxanduva olupheleleyo phantsi komthetho. Ukuhamba ngebhayisekile luxanduva lwakho ngalo mhla wafumana ikhowudi yokuqeshisa ngebhayisekile de iqela lethu lenkonzo lijonge ibhayisekile ligqibe kwelokuba iqeshe ibhayisekile. Iitsheki zinokwenzeka ngokungahleliwe (kwiiyure ze48 emva kokubuya kwebhayisekile).
Jonga imigaqo kunye nemeko yolwazi oluthe kratya.
Kanye ngemini yokuqala ye-30 min
Intlawulo ngeyure nganye
I-24 ibukela i-15 TL
Iiveki ze-1 (iintsuku ze-7) ye-60 TL
Imephu ye Konya Netbike